Guddoomiyaha gobolka Sool oo sheegey in amaradii gudiga ka dhaqan galeen gobalka sool – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha gobolka Sool oo sheegey in amaradii gudiga ka dhaqan galeen gobalka...
Guddoomiyaha gobolka Sool oo sheegey in amaradii gudiga ka dhaqan galeen gobalka sool
Waxaa Rabbi mahadiis ah in gobolka Sool si dhaba ay uga fuleen dhammaan go’aamada iyo da’daallada ku àaddan ka hortegga xannuunka Covid-19. Hindisa qaddiyadan oo ahaa laba tiir oo kala ah wacyi gelin joogto iyo awaamiir loo arkay in saf-markan looga gashaaman karo ayaa si ficila u shaqeeyey .
Guddiga heer Qaran ee uu hoggaanka u yahay Madaxweyne ku xigeenku Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici, iyo xafiiska khaaska ah ee covid19 ee xoghayaha guud, kan heer gobol iyo guddiyada dhakhatiirta ayaan uga mahad naqaya kaalinta ay ka qateen guulaha gobol ahaan aynu ka gaadhnay ka hortegga Covid-19.
Waxaa suntaya guulaha aan xusay, Rabbi inaan uga mahad naqnnana ay waajib tahay in gobolka Sool oo marka laga tego gobollada dalka, xuduud baaxad weyn la leh dallalka Soomaaliya iyo Ethiopia oo Alle ha ka dul qaado’e kiisas badan laga helay inaysan saamayn oo aan wax kiisa laga heyn.
Mar kele waxaan bulshada gobolka Sool guud ahaan aan ku boorinayaa inay feejignadaan oo ay u hogaansamaan talooyinka iyo go’aamada ku saabsan ka hortegga xannuunka Covid-19
Shirka Caalamiga ah oo markii ugu horeysay lagu qabanayo Muqdisho